Isikhalazo | Law & More | I-Eindhoven ne-Amsterdam
Kujwayelekile ukuthi umuntu oyedwa noma bobabili bavumelane ngesinqumo ecaleni labo. Ngabe awuvumelani nesinqumo senkantolo? Ngemuva kwalokho kunenketho yokufaka lesi sikhalazo enkantolo yezikhalazo. Kodwa-ke, le ndlela ayisebenzi ezindabeni zombango ezinenzalo engaphansi kwe-EUR 1,750. Ngabe uyavumelana nesinqumo senkantolo? Ngemuva kwalokho ungaqhubeka nokuzibandakanya enkantolo. Yize kunjalo, uzakwabo naye angakwazi ukunquma ukukhanga.
NGABE UYAVUMA NGOKUGQIBELA KWESIKHATHI?
> Isikhathi sokukhalaza
> Isikhalazo enkantolo yezokuphatha
> Ngemuva kwesikhalazo
Amandla okukhalaza alawulwa esiGabeni 7 se-Dutch Civil Code of Procedure. Lokhu kungenzeka kususelwa emgomweni wokuliphatha leli cala ezimweni ezimbili: ekuqaleni ngokuvamile enkantolo nasenkantolo yokudlulisa amacala. Kukholelwa ukuthi ukuphatha leli cala izikhathi ezimbili kuthuthukisa ikhwalithi yezobulungiswa, kanye nokuzethemba kwezakhamizi ekuphatheni kwezobulungiswa. Isikhalazo sinemisebenzi emibili ebalulekile:
• Umsebenzi wokulawula. Ngokudluliswa kwesicelo, cela inkantolo ukuthi ilibuyekeze kaningi icala lakho. Ngakho-ke inkantolo ibheka ukuthi uma ijaji ekuqaleni liwatholile yini amaqiniso, lalisebenzisa kahle yini umthetho nokuthi lahlulele kahle yini. Uma kungenjalo, isahlulelo sejaji lokuqala lizochithwa yinkantolo.
• Shiya ithuba. Kungenzeka ukuthi ukhethe isisekelo esingalungile sezomthetho ekuqaleni, akazange abumbe isitatimende sakho ngokwenele noma anikeze ubufakazi obuncane kakhulu besitatimende sakho. Ngakho-ke umgomo wokuyeka ngokuphelele usebenza enkantolo yezikhalazo. Hhayi nje kuphela ukuthi wonke amaphuzu angalethwa enkantolo futhi ukuze abukezwe, kodwa wena njengeqembu lesikhalazo uzoba nethuba lokulungisa amaphutha owenze ekuqaleni. Kukhona futhi kungenzeka kwesikhalazo ukwandisa isimangalo sakho.
Abameli bethu bakulungele
Uma ukhetha inqubo yokudlulisa amacala enkantolo, kufanele ufake isikhalazo kungakapheli isikhathi esithile. Ubude baleso sikhathi buncike ohlotsheni lwamacala. Uma isahlulelo siphathelene nokwahlulela kuka-a inkantolo yomphakathi, unezinyanga ezintathu ukusuka ngosuku lokwahlulela okufanele ufake isikhalazo. Ngabe bekumele ubhekane nokufingqwa kwenqubo ekuqaleni? Kuleso simo, isikhathi esingamaviki amane sifaka isicelo enkantolo. Ngabe inkantolo yobugebengu cabanga bese wahlulela icala lakho? Kulelo cala, usenamasonto amabili kuphela ngemuva kwesinqumo sokufaka isikhalazo enkantolo.
Njengoba imigomo yesikhalazo isebenza njengeqiniso, le mikhawulo kufanele futhi ilandelwe. Ngakho-ke isikhathi sokukhalaza singumnqamulajuqu onqunyelwe. Ngabe akukho sikhalazo esizofakwa ngalesi sikhathi? Ngemuva kwalokho usuphuzile ngakho-ke akunakuphikwa. Kusezimeni ezihlukile kuphela lapho isikhalazo singafakwa ngemuva kokuphela kwesikhathi sokugcina sokukhalaza. Lokhu kungaba njalo, ngokwesibonelo, uma imbangela yokudluliswa kwesicelo sekwedlule isikhathi kuyiphutha lejaji uqobo, ngoba uthumele i-oda kumaphathi sekwedlule isikhathi.
Ngokwesimo sesikhalazo, umgomo oyisisekelo wokuthi izinhlinzeko maqondana nesikhathi sokuqala ziyasebenza nenqubo yokudlulisa isikhalazo. Isikhalazo ngakho-ke siqala ngo-a isihlokwana ngesimo esifanayo nezidingo ezifanayo nezokuqala. Kodwa-ke, akusadingeki ukusho izizathu zokukhalaza. Lezi zizathu kufanele zethulwe kuphela esitatimendeni sezikhalazo ngazo kulandelwa i-subpoena.
Izizathu zokudluliswa kwesicelo kuyizo zonke izizathu okufanele kufakwe kuzo okhalazayo ukuthi umbango wenkantolo okokuqala kufanele ubekelwe eceleni. Lezo zingxenye zesahlulelo okungakabekwa sisekelo kuzo, zizoqhubeka zisebenze futhi ngeke zisadingidwa uma sekudluliswa icala. Ngale ndlela, impikiswano yokufaka isikhalo ngakho-ke i-batten esemthethweni ilinganiselwe. Ngakho-ke kubalulekile ukukhulisa ukuphikisana okucatshangelwe esinqumweni esinikezwe ekuqaleni. Kubalulekile ukwazi kulo mongo ukuthi indawo ebizwa jikelele, ehlose ukuletha impikiswano ngokugcweleyo yesinqumo, ayikwazi futhi ngeke iphumelele. Ngamanye amagama: izizathu zokudlulisa kumele zibe nokuphikisana kokhonkolo ukuze kucace nakwelinye iqembu ngokwesimo sokuzivikela ukuthi iziphi iziphikiso empeleni.
Isitatimende sezikhalazo siyalandela isitatimende sokuzivikela. Ngokwecala lakhe, ummangalelwa uma edlulisa icala kungenzeka abeke izizathu eziphikisana nesinqumo esibhekene nalesi sicelo futhi aphendule esitatimendeni sesikhalazo. Isitatimende sezikhalazo kanye nesitatimende sokuzivikela kuvame ukuqeda ukushintshana kwezikhundla lapho kunesikhalazo. Ngemuva kokuba amadokhumenti ebhaliwe edlulisiwe, ngokomthetho akusavunyelwe ukubeka izizathu ezintsha, noma kungenzeki ukwandisa isimangalo. Ngakho-ke kucacisiwe ukuthi ijaji ngeke lisakwazi ukunaka izizathu zokudluliswa kwesicelo ezibekwe phambili ngemuva kwesitatimende sokudluliswa kwecala noma ukuzivikela. Okufanayo kusebenza ekwandeni kwesimangalo. Kodwa-ke, ngendlela ehlukile, umhlabathi usalokhu uvumelana ngokuhamba kwesikhathi uma elinye iqembu linikeze imvume yalo, isikhalazo sivele ngohlobo lwengxabano noma kube khona isimo esisha ngemuva kokufakwa kwemibhalo ebhaliwe.
Njengomphumela wokuqala, umjikelezo obhalwe phansi okokuqala ulandelwa njalo ukulalelwa kwecala enkantolo. Kukhona okuhlukile kule nqubo kulesi sikhalazo: ukulalelwa ngaphambi kwenkantolo kungakhethwa ngakho-ke akuvamile. Amacala amaningi ngakho-ke ngokuvamile axazululwa ngokubhala yinkantolo. Kodwa-ke, bobabili abathintekayo bangacela inkantolo ukuthi ilalele icala labo. Uma iqembu lifuna ukulalelwa phambi kwenkantolo yokudluliswa kwamacala, inkantolo kuyofanela ikuvumele lokho, ngaphandle uma kunezimo ezikhethekile. Kuze kube kuleli zinga, umthetho-icala ongakwesokunene wokufaka isikhalo usalokhu ukhona.
Isinyathelo sokugcina ekuthatheni izinyathelo zomthetho lapho kudluliswa isikhalazo ukwahlulela. Kulesi sinqumo, inkantolo yokudlulisa amacala izokhombisa ukuthi isinqumo sokuqala senkantolo besilungile yini. Empeleni, kungathatha izinyanga eziyisithupha noma ngaphezulu ukuthi amaqembu abhekane nesinqumo sokugcina senkantolo yokudlulisa amacala. Uma izizathu zomfakisicelo ziphakanyisiwe, inkantolo izosibeka eceleni isinqumo esinqunyiwe bese ixazulula icala uqobo. Ngaphandle kwalokho inkantolo yokudlulisa icala izosisekela ngokunengqondo isinqumo esinqunyiwe.
Isikhalazo enkantolo yezokuphatha
Ngabe awuvumelani nesinqumo senkantolo yezokuphatha? Ngemuva kwalokho ungafaka isikhalo. Kodwa-ke, lapho usebenzelana nomthetho wokuphatha, kubalulekile ukukhumbula ukuthi kuleso simo kufanele uqale ubhekane neminye imigomo. Ngokuvamile kuba nesikhathi esingamaviki ayisithupha kusukela kumenyezelwe isinqumo sokwahlulelwa kokuphatha, lapho ungafaka khona isikhalazo. Futhi kuzodingeka ubhekane nezinye izimo ongaphendukela kuzo kumongo wesikhalazo. Iyiphi inkantolo okufanele uye kuyo kuya ngohlobo lwamacala:
• Ezokuphepha komphakathi kanye nezisebenzi zomphakathi. Amacala mayelana nokuphepha komphakathi kanye nemithetho yabasebenzi bakahulumeni iphathwa ngamacala okudluliswa kwamacala yiCentral Board of Appeal (CRvB).
• Umthetho wokuphatha ezomnotho kanye nobulungiswa bokuqondiswa kwezigwegwe. Imicimbi ngokwesimo, phakathi kokunye, Umthetho Wokuncintisana, Umthetho Wokuposa, Umthetho Wezokuhweba kanye Nezokuxhumana kusingathwa enkantolo yokudluliswa kwezikhalazo yiBhodi Yezikhalazo Ngebhizinisi (i-CBb).
• Umthetho wokufuduka nezinye izindaba. Amanye amacala, kubandakanya namacala okufika, aphathwa ngokudluliswa kwezikhalo yi-Administrative Jurisdiction Division yoMkhandlu Wezwe (ABRvS).
Imvamisa, amaqembu anamathela esinqumweni senkantolo yokudlulisa amacala bese icala lawo lixazululwa lapho kudluliswa icala. Kodwa-ke, ingabe awuvumelani nesinqumo senkantolo sokudlulisa amacala? Bese kuba nokukhethwa ukufaka isidumbu eNkantolo Ephakeme yaseDashi kuze kube izinyanga ezintathu ngemuva kwesinqumo senkantolo yokudlulisa amacala. Le ndlela ayisebenzi ezinqumweni ze-ABRvS, CRvB kanye ne-CBb. Yize kunjalo, izitatimende zale mizimba ziqukethe izahlulelo zokugcina. Ngakho-ke akunakwenzeka ukuthi uphikise lezi zinqumo.
Uma kungenzeka ukuthi kukhona ukukhishwa kwesisu, kufanele kuqashelwe ukuthi asikho isikhala sokuhlola okuyiqiniso kwengxabano. Izizathu ze-cassation nazo zilinganiselwe. Yize kunjalo, ukukhishwa kwesidumbu kungaqalwa kuphela njengoba izinkantolo eziphansi zingazange zisebenzise umthetho ngendlela efanele. Kuyinqubo engathatha iminyaka futhi ibandakanye nezindleko eziphakeme. Ngakho-ke kubalulekile ukukhipha yonke inqubo yokufaka isikhalazo. Law & More uyakujabulela ukukusiza ngalokhu. Ngemuva kwakho konke, ukukhanga kuyinqubo eyinkimbinkimbi kunoma yiliphi igunya, ngokuvamile kubandakanya izintshisekelo ezinkulu. Law & More abameli abangochwepheshe kuzo zombili izigebengu, ezokuphatha kanye nezomthetho womphakathi futhi bayakujabulela ukukusiza ekumeni kokudlulisa amacala. Ingabe unayo eminye imibuzo? Sicela uxhumane Law & More.
Bese usithinta ngocingo +31 40 369 06 80 noma uthumele i-imeyili ku: